एकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी एकै पटक बने ग’र्भवती ! – Online Khabar 24
October 24, 2021 October 24, 2021 by admin admin
अमेरिकाको क्लालि`फोर्नियामा जन्मेका तिम्लिया दिदी बहिनी एकै पटक गर्भ वति भए पछि चर्चामा छाएका छन् ।बेला`यतको मिरर डट सि‌ओ डट यूकेका अनुसार यी तीनै जना दिदी बहिनी एकै पटक गर्भ वती भएका छन् ।
यी तीन दिदी बहिनीले केही समयको अन्तरालमा पालै`पालो सन्तान जन्माउ`नेछन् । यी तीन दिदी`बहिनीहरु गिना, निना र भिक्टोरिया हुन् ।
Prev४९ वर्षमा भारतीय चर्चित नायक गोबिन्दाले नेपाली चेली सुनितासँग दोस्रो विबाह गरेको रहस्य यस्तो !
nextअनन्यालाई एनसीबीको प्रश्न : आर्यानले ड्र’ग्स खाएको देख्नु भएको छ ?